September 2021 – Page 11 – Shwe Yaung Lan
လူ့ဘဝ တိုတောင်းလွန်းလို့ အချိန်တွေမကုန်ခင် သိစေချင်ပါတယ်
September 2, 2021 SYL 0
အချိန်မနှောင်းသေးခင် သိစေချင်တယ်… တကယ်တော့ လူ့ဘဝဟာ အချိန်တိုတိုလေးပါ။လူတိုင်းသိတဲ့ အရာတစ်ခုပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်တိုတာလဲ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ပိုင်ဆိုင်ကြရမလဲ ဘယ်နှစ် နှစ်လဲ ..ဘယ်နှစ်ရက်လဲ .. ဘယ်နှစ်နာရီလဲ လူတိုင်းအတိကျတော့ မသိကြဘူးပေါ့ ဘယ်သူမှလဲတွက်မကြည့်ခဲ့မိဘူးလို့ထင်တယ်… အများသတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရှိတယ် 75 နှစ်တာ သက်တမ်းလို့ပြောကြတယ်။ တစ်နှစ်မှာ 365 ရက်ရှိတယ် 75 နှစ် ကို 365 ရက်နဲ့ ×လိုက်ရင် ရက်ပေါင်း 27375 ရက် ရတယ်။ […]
Online ကနေ ပစ္စည်းတွေမှာခဲ့ကြပြီးမှ နောင်တအကြီးကြီးရကြသူများ
Online ကနေ ပစ္စည်းမှာတယ်ဆိုတာ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာအောင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဝယ်သူအနေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ အလွဲလေးတွေနဲ့ကြုံရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြမယ့် ပုံတွေကတော့ ရယ်ရခက် ငိုရခက် ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 1. မှာလိုက်တာတော့ မျက်နှာပေါင်းတင် mask ပါပဲ..ရောက်ချလာတာက နှဖူးပေါင်းတင် mask ဖြစ်နေတာကိုတော့ မတတ်နိုင်ဘူးလေ 2. မိသားစုနွေးနွေးထွေးထွေး ခြုံချင်လ်ု့ိ စောင်အကြီးကြီး မှာလိုက်တာလေ..ရောက်လာတာက မထိုးရသေးတဲ့ ချည်ကြီးတဲ့လား 3. ကိုယ့်မျက်နှပါတဲ့ ခေါင်းအုံးလိုချင်တာမလား..ရော ယူပေတော့ […]
မင်္ဂလာပွဲ လာတဲ့သူတိုင်းကို I Pad လက်ဆောင်ပေးတဲ့ စုံတွဲ
September 1, 2021 SYL 0
ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူ ခမ်းနားလှပပြီး တစ်သက်တာအမှတ်ရနေစေမယ့် မင်္ဂလာပွဲလေးကျင်းပရဖို့က မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အိပ်မက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုကံထူးမှုမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံက မော်ဒယ်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ချစ်သူနဲ့အတူ ခမ်းနားတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကို ဒူဘိုင်းရှိ စျေးအကြီးဆုံး ကြယ် ၇ ပွင့် ဟော်တယ်မှာ ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ချစ်သူဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပွဲကို ဒူဘိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပေမယ့် မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာဆင်ယင်ထားတဲ့ပန်းတွေကို နယ်သာလန်က မှာယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံက David Austin နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ ဆင်ယင်ထားတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်လေးထဲမှာ နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာရဲ့လက်ရာကို ဝတ်ဆင်ပြီး ချစ်သူလက်ကိုတွဲကာ မင်္ဂလာဆောင်ခွင့်ရတဲ့ […]
ျမင္သူတိုင္း ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္ေစတ့ဲ ဓာတ္ပံုမ်ား
ဒီေန႔မွာေတာ့ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ျမင္ရခဲတ့ဲ ဓာတ္ပံုေလးေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ 1) ငွက္ေတြအလား သစ္ကိုင္းေပၚက ဆိတ္မ်ား 2) ပင္လယ္ျပင္က ေရလွိုင္းႀကီးေတြကို ၾက႕ံၾက႕ံခံေနတ့ဲ မီးျပတိုက္ 3)ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရ႔ဲ အ့ံဖြယ္ ေကာင္းကင္ျမင္ကြင္းတစ္ခု 4)မဂၤလာပါအမ..က်ေနာ္လည္း ဖုန္းေျပာခ်င္လို႔ 5)ဟင္..ဘယ္က သရဲေလးေတြတုန္း 6)ေကာင္းကင္ႀကိးလား ေပါင္မုန္႔လား 7)ဒီေလာက္လွတ့ဲ မိုးႀကိဳးအရင္က ျမင္ဖူးလား 8)ငါးဘီးလူးႀကီးေတြလို႔ အေခၚခံရတာ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေလ 9)ေလဆင္ႏွာေမာင္းႀကီး ကပ္လာလည္း မမႈ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရဖို႔ […]
စာဖတ္သူပရိသတ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကိုက္ ႐ိုက္ထားမိတ့ဲ ဓာတ္ပံုေလးေတြက္ို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ 1) လိပ္ျပာ မ်က္မွန္သစ္ ဝယ္ၾကအံုးမလား 2)အလွခ်င္းျပဳင္ ဘယ္သူႏိုင္ 3)လီဘာတီ ရ႔ဲ စူပါစြမ္းအင္ 4)ျမင္းေခါင္းန႔ဲလူ ျမင္ဖူးလား 5)ေႏြရာသီအတြက္ အထူးထုတ္ ဦးထုပ္ 6) ေခြးေလးေတြေတာင္ ငါးမွ်ားတတ္ေနၿပီပဲ 7) ဘယ္သူ႔မ်က္လံုး ပိုလွလဲ 8)ေတာ္ေတာ္ရွည္တ့ဲ ေခြးေလးပါလား 9)ဘားေမာင္ရ႔ဲ ေျခတံအလွေလး ႐ွဳစားပါအံုး 10)ေဟ့..ဘာ႐ွဳေနတာလဲ 11)ေမွာ္ဦးထုပ္က […]
တစ်ဦးကစေတနာ တစ်ဦးကမေတ္တာရယ်လို့ အပြန်အလှန်ပေးကမ်းရင်း ဖြတ်သန်းကြတဲ့ဘဝတွေက တကယ်ကိုအေးချမ်းလွန်းတဲ့ဘဝတွေပါ။ . . ကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးကြွေးကို နားလည်သိရှိပြီး တတ်စွမ်းသလောက်ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းဟာလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ဆိုကြပါတယ်။ . . ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ Nanay နဲ့ Taytay တို့ဇနီးမောင်နှံဟာ မပြည့်စုံကြပေမယ့် မွေးစားသားလေးဖြစ်တဲ့ Jayvee Lasaro Badile ကို မေတ္တာအပြည့်နဲ့ ပြုစုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ . စားဝတ်နေရေးမပြေလည်တာကြောင့် ရုန်းကန်ရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ပေမယ့် သားဖြစ်သူရဲ့ပညာရေးကို ထောက်ပံ့ဖို့ဆိုလက်မနှေးကြတဲ့ မွေးစားမိဘတွေကို သနားတဲ့ Jayvee […]
အိမ်မြှောင်ရောင်းချခြင်းဟာ အွန်လိုင်းလောကမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ . အင်တာနက်ပေါ်မှာ Get lizard excrement Kiem heavily Kim ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Page တစ်ခုဝေမျှတဲ့အခါ လူများစွာ ပြောစရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် ။ . အိမ်များမှ အိမ်မြှောင်များစွာကို ‌ရောင်းချကြောင်း ကြေငြာပြီး တစ်ကီလိုလျှင် ဘတ် ၃၀၀ နှုန်းမြင့်တဲ့ အိမ်မြှောင်ခြောက်ကို ဖောက်သည်ထံသို့ အရောက်ပို့ပေးကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ် ။ . […]